By vijayafm on	 October 2, 2018 नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, फोटो फिचर, विविध खबर, श्रीधर उपाध्याय, स्थानीय
हर्दिमा साप्ताहीक गाउँघर क्लीनिकको प्रयास गर्दै छाँै – नगर स्वास्थ्य प्रमुख सापकोटा
श्रीधर उपाध्याय / पवित्रा पराजुली
गैँडाकोट । निरोगी र तन्दरुस्त मान्छेलाई कालिगण्डकी करिडोरको बाटो हुँदै आउन जान मुश्किल नै पर्दछ । अझ गर्भवती महिलाका लागि त्यो बाटो यमराज मार्ग जस्तै लाग्दछ । गर्भवती अवस्थामा त्यस बाटोमा कति महिलाले यस अघि नै ज्यान गुमाइ सकेका छन् । उचित उपचार पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर गँैडाकोट ३ का ढोडेनी, गडम्दी, हर्दि केलादीका महिलाले उपचारका लागि कहिले सुरक्षित यात्रा गर्न पाउलान् । कहिले उपचार आफ्नै गाउँमा सहज रुपमा पाउलान् । यो प्रश्नको जवाफ कहिले आउला ? कसले देला ? गैँडाकोट ३ का हरेक मानिसको प्रतिक्षा नै यही बनेको छ । स्थानीय सरला खनाल भन्नुहुन्छ “ बाटोको अवस्था सम्झीदा पनि गर्भवती महिलाको मन काप्छ, यही बाटोको अवस्थाले महिलाले ज्यानै समेत गुमाएका छन् । भनेको बेला साधन नपाउने पाए पनि बाटोको असहजता यसले कोही गर्भवती महिलाले रगत धेरै बगेर ज्याउन गुमाउनु परेको छ, कोही साल अड्केर मर्नुपरेको छ । उपचारका लागि लैजान पनि कठीन छ, यही राखाँै ज्यानै जाने गरेको छ ।”
स्थानीय सरला खनालको जस्तै पीडा अर्की स्थानिय पार्वती ढकालको पनि छ । पार्वती ढकालसंग करिब ४ वर्ष अघि डोकोमा बसेर सुत्केरी हुनका लागि अस्पताल पुग्नु परेको तितो अनुभव छ । ढकाल भन्नुहुन्छ “ म आफैलाई पर्दा त्यतिबेला बाटोको अवस्था राम्रो थिएन । म आफै डोकोमा गएर सुत्केरी भएको हूँ, गडम्दीबाट केही समय पहिले दुईजनालाई बोकेरै अस्पतालसम्म लगेका थियौँ ।”
ढोडेनीमा र हर्दिमा स्वास्थ्य संस्था नभएको भने होइन । ढोडेनीमा औषधि पसल पनि खुलेको छ । केही ठूला स्वास्थ्य समस्या पर्दा र गर्भवती महिलाका लागि नियमित चेकजाँचका लागि समस्या हुने गरेको स्थानीयको भनाइ छ । वडाको हरेक समस्या बाटोमा गएर ठोेकीने गरेको छ । बाटोको समस्याले गर्दा नै नवलपुर र छिमेकी जिल्ला चितवनमा रहेका अस्पताल आउन समस्या हुने गरेको छ । त्यही बाटोकै समस्याको कारणले अकस्मात कोहि बिरामी भएपनि एम्बुलेन्स पुग्न कठिन छ । त्यहाँको सबै स्थानीयको एउटा भनाइ छ “कि सुरक्षित बाटो चाहियो, कि सुरक्षित उपचार, एउटै नगरभित्रका अरु ठाउँका महिलालाई हेर्यौँ भने मन भारी भएर आउँछ ”
हर्दिक झ्यांग बहादुर विकको पनि दुःखको कथा छ । २३ सालदेखि हर्दिमा बस्दै आउनुभएका विकले बाटोकै समस्याकारण ९ वर्ष अघि माइली आमाको ज्यान गुमाउनुभएको थियो । विरामी आमालाई बाटोको अप्ठेरोका कारण अस्पताल लैजान नसक्दा ज्यान गएको थियो ।
बाटोको समस्याका कारण र ढोडेनी, हर्दि केलादी र गडाम्दी लगायतका क्षेत्रमा गर्भवती भएको अवस्थामा नियमित चेकजाँचकालागि महिलाहरुलाई समस्या हुने गरेको छ । गभर्वती भएको अवस्थामा उपचार तथा नियमित चेकजाँचका लागि आधारभूत सेवासुविधा भएको स्वास्थ्य चौकी मात्र भैदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यस स्थानका स्थानीयको अपेक्षा रहेको छ ।
यता गैँडाकोट नगर स्वास्थ्य प्रमुख इन्द्रराज सापकोटाले गर्भवती महिलाका लागि ढोडेनीमा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा नियमित चेकजाँचका लागि एक जना कर्मचारी दुई वर्ष देखि खटाइएको बताउनुभएको छ । शहरी स्वास्थ्य केन्द्रमा सुत्केरी गराउने सरकारको प्रावधान नभएको हुँदा अहिले त्यसको व्यवस्था गर्न नसकिने नगर स्वास्थ्य प्रमुख शर्माको भनाइ छ । नियमित चेकजाँचका लागि ढोडेनीमा सेवा रहेको तर हर्दिमा गाउँघर क्लिनिक रहेका हुँदा त्यहाँ भने नियमित सेवा नरहेको शर्माले बताउनुभयो । हर्दिमा महिनाको एक पटक गाउँघर क्लीनिक सञ्चालन रहेको छ तर हामीले त्यहाँको समस्यालाई केन्द्रीत गरेर साप्ताहीक रुपमा गाउँघर क्लीनिक सञ्चालनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।